CC Shakuur: Qatar si weyn ayay u dhibaateysay Soomaaliya | Keydmedia
CC Shakuur: Qatar si weyn ayay u dhibaateysay Soomaaliya
Xukuumadda Federaalka, hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa isku khilaafsan arrimo ay ugu horeyso doorashada dib loo dhigay
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ee mucaaradka, C/raxmaan C/shakuur Warsame, ayaa ku eedeeyay Dowladda Qatar inay faragelin ku heyso arrimaha siyaasada ee Soomaaliya ayna la shaqeyneyso madaxda dowladda federaalka si loo kordhiyo mudada ay xafiiska hayaan.
"Qatar si weyn ayay u dhibaateysay Soomaaliya. Waxaan ugu baaqayaa inay joojiso isku daygeeda ay ku doonayso inay muddo kororsi ugu sameyso hoggaamiyeyaasha waqtigoodu dhammaaday. Waxaan sidoo kale ugu baaqeynaa dhammaan kuwa doonaya inay muddo kororsi sameeyaan inay soo afjaraan himilooyinkooda, ayna naftooda iyo shacabkooda ku kalsoonaadaan," CC Shakuur ayaa sidaasi bartiisa Twitter-ka ku soo qoray.
Xukuumadda Federaalka, hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa isku khilaafsan arrimo ay ugu horeyso doorashada dib loo dhigay, sharciga doorashada iyo matelaadda gobolka Banaadir ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay xoojisay xiriirka Qatar, taasoo maal galisay dhowr mashruuc oo dalka laga fuliyay, sida wadooyinka isku xira Muqdisho iyo Afgooye, oo dhismaheeda la joojiyay kadib markii Al-Shabaab qaraxyo ku dishay Injineeradii Turkiga ee ka shaqeynayay.
Si kastaba, Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa dhowr jeer ku eedeeyay Qatar inay faragelin ku hayso arrimaha dalka, ayna wax u dhimayso amniga, maadaama dalkan yar ee Khaliijka ku yaalla 2017 xiriirka ugu jareen Sacuudiga iyo Imaaraadka inuu taageero argagaxisada.